लकडाउनका समय खानुस् यी खानेकुरा ! | raynewsdaily.com
लकडाउनका समय खानुस् यी खानेकुरा !
Thursday, June 10th, 2021, 4:50 pm
काठमाडौं । लकडाउनका कारण घरमै रहेर कोरोना भाइरसको सामना गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा अधिकांश मानिसलाई दिन गुजार्न कठिनाइ भइरहेको छ।
हाम्रो शरीरलाई कर्बोहाइडेड, चिल्लो पदार्थ, प्रोटिन, भिटामिनको जरुरत भए तापनि अहिलेको अवस्थामा सिएफ अर्थात् कार्बोहाइडेट, फ्याटभन्दा पिएफ ९प्रोटिन, भिटामिन० जरुरी छ। घरमा बसिरहेको र कुनै काम नहुँदाको यो निष्क्रिय अवस्थामा कार्बोहाइडेट र चिल्लो पदार्थ कम गर्ने र त्यही अनुसारको खाना खाँदा स्वस्थकर हुन्छ। त्यसैले अहिलेको उत्तम डाइट भनेको मिक्स गरेर खानु नै हो।
आलुतामा, बोडी: आलुतामा, बोडी पनि नेपालको एक प्रसिद्ध र प्राचीन खाना मानिन्छ। यो मैलिक खाना पनि अहिलेको लागि उत्तम हुनसक्छ र सहज रुपमा बनाउन सकिन्छ।